Semalt ले खोज कन्सोलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रकट गर्दछ
तपाईंले निश्चित रूपमा लोकप्रिय गुगल खोज कन्सोल उपकरणको बारेमा एक भन्दा बढी चोटि सुन्नुभयो। यसले वेबसाइट व्यावसायिका लागि उपयोगी हुने धेरै व्यावहारिक कार्यहरू सक्षम गर्दछ। के तपाइँ यसको सम्भावनाहरू जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ! हाम्रो GSC शुरुआत गाइड परिचय गर्दै!
यस पोष्टमा तपाई गुगल खोजी कन्सोलको बारेमा सब भन्दा बढि महत्वपूर्ण जान्नु हुनेछ, त्यो हो:
यो वास्तवमा के हो?
यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदाहरू के हुन् र तपाईंले किन यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ?
यो केको लागि उपयोगी हुन सक्छ?
यसलाई तपाइँको वेबसाइट कसरी जडान गर्ने?
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को बारे मा के जान्न सक्नुहुन्छ?
यो पोष्ट भर्खरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि मार्गनिर्देशन हो, त्यसैले गुगल सर्च कन्सोल उपकरण वास्तवमै के हो भनेर वर्णन गरौं।
GSC एक नि: शुल्क उपकरण हो जुन गुगलले वेबसाइट प्रशासकहरूको लागि सिर्जना गरेको हो। यो विशेष गरी वेबसाइट स्थिति वा इन्टरनेट मार्केटिंगको साथ काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि उपयोगी छ। यससँग धेरै प्रकार्यहरू छन् जुन पृष्ठ अनुक्रमणिका स्थिति वा जैविक यातायातको चलिरहेको अनुगमन सक्षम गर्दछ।
तपाईंले किन खोज कन्सोल प्रयोग गर्नुपर्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू
गुगल खोज कन्सोलले गुगल खोज ईन्जिनहरूमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाइँ HTML वा प्रोग्रामिंग जान्नु आवश्यक छैन। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको संरचना, वेबसाइटको सामान्य संरचना विश्लेषण गर्नु हो र तपाईं परिवर्तनहरू गर्न डराउनुहुनेछैन। यो सानो प्रयास खोजी परिणाममा तपाइँको वेबसाइटको स्थिति सुधार गर्न मा धेरै मद्दत गर्दछ।
GSC उपकरणले तपाइँलाई वेबसाइट नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ:
जैविक यातायात (प्रभाव र क्लिक);
पृष्ठ अनुक्रमणिका स्थिति, मोबाइलमा पृष्ठमा त्रुटिहरू सहित;
संख्या र आन्तरिक र बाह्य लिंकहरूको गुणस्तर।
थप रूपमा, एससीमा हामी गुगलले लगाएको दण्डहरू, भाइरसहरू वा ह्याकरहरूको हमलाको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्छौं। यस उपकरणले खोजी ईन्जिनहरूको मोडरेटर, एल्गोरिदमहरू र वेबमास्टर बीचमा सञ्चार सक्षम गर्दछ।
वेबसाइटको प्रत्येक प्रशासकले यसको कार्यान्वयनको लगत्तै गुगल खोजी कन्सोल लागू गर्नुपर्नेछ। एससी, गुगल एनालिटिक्स जस्ता, ट्रैकिंग कोड वेबसाईटमा थपिएको क्षणदेखि नै वेबसाइटको ट्राफिकलाई निगरानी गर्दछ, त्यसैले यो सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ। हालको संस्करणमा, हामी १ 16 महिना पछाडि डेटा विश्लेषण गर्न सक्छौं। यदि तपाईं अहिले आफ्नो साइटको लागि एसईओको बारेमा सोच्नुहुन्न र तपाईंलाई जीएससी चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन भने पनि, यो तपाईंको वेबसाइटमा थप्न लायक छ किनकि यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र उपकरण हो। भविष्यमा, जब तपाईं एसईओ गतिविधिहरूमा निर्णय लिनुहुन्छ, यस समयमा खोजी कन्सोलले संकलन गरेको डाटा वेबसाइटको अप्टिमाइजेशनमा ठूलो सहयोगी हुनेछ।
गुगल खोजी कन्सोल गाइड - कसरी सुरू गर्ने?
अब तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको साइटलाई GSC मा जडान गर्न लायक छ र यो जति सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईको वेबसाइटमा खोजी कन्सोलको कार्यान्वयनका लागि केहि साधारण चरणहरू चाहिन्छ!
यो गर्नको लागि तपाईलाई जीमेल खाता चाहिन्छ। जाऊ त्यहाँ https://search.google.com/search-console/welcome र तपाईंको ईमेलमा लग ईन गर्नुहोस्। त्यसो भए माथिल्लो बायाँ कुनामा तपाईले नयाँ सेवा थप्न विकल्प फेला पार्नुहुनेछ।
क्लिक गरेपछि "सेवा थप्नुहोस्", तपाईं सेवा को प्रकार छनौट गर्न को लागी तल चित्र मा सक्षम हुनेछ।
गुगल खोजी कन्सोलले २ प्रकारका वेबसाइट सेवाहरू समर्थन गर्दछ: डोमेन सेवा र यूआरएल उपसर्ग सेवा। डोमेन-स्तर सेवाले सबै सब-डोमेनहरू साथै बहुविध प्रोटोकलहरू (HTTP, HTTPS वा FTP) लाई समेट्छ। यसको विपरीत, यूआरएल उपसर्गको साथ सेवाले प्रोटोकल (HTTP/HTTPS) सहित, विशिष्ट उपसर्ग सहित यूआरएलहरू मात्र समेट्छ। छनौट तपाईको हो, तर तपाईले यो याद गर्नुपर्दछ कि एससी का लागि HTTP र HTTPS वेबसाइट दुई फरक डोमेनहरू छन्। थप रूपमा, SSL प्रमाणपत्र लागू गरेपछि, तपाइँले वेबसाइट नयाँ सेवाको रूपमा थप्नु पर्छ। तपाईं गुगलमा सेवाहरूको बिभिन्न प्रकारहरू बीचका भिन्नताहरूको बारेमा बढि पढ्न सक्नुहुन्छ कन्सोल मद्दत केन्द्र खोजी गर्नुहोस्।
साइट नाम प्रविष्ट गरेपछि र "अर्को" क्लिक गरेपछि, तपाईले प्रमाणिकरणको धेरै सम्भावनाहरूको साथ सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ:
HTML फाइल प्रयोग गर्दै;
HTML ट्याग प्रयोग गर्दै;
गुगल एनालिटिक्स द्वारा;
गुगल ट्याग प्रबन्धक द्वारा;
डोमेन नाम प्रदायकको रूपमा।
तपाईंको वेबसाइट GSC मा लिंक गर्न प्रमाणीकरण आवाश्यक हुन्छ। गुगलले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं सम्पत्तीको मालिक हुनुहुन्छ किनकि तपाईं यसको डेटा खोजी ईन्जिनहरूमा पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। प्रत्येक सेवामा कम्तिमा एउटा प्रमाणित मालिक हुनुपर्दछ।
दिईएको प्रमाणिकरण विधिमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले कसरी आफ्नो साइट प्रमाणित गर्ने विस्तृत निर्देशनहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। सामान्यतया, यसले पृष्ठमा कोड स्निपेट थप्न समावेश गर्दछ जुन कार्बनिक ट्राफिक ट्र्याक गर्दछ र साइट भित्रका अन्य तत्त्वहरूको निगरानी गर्दछ।
पृष्ठमा मेटा ट्याग थपे पछि, तपाईं प्रमाणिकरण पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। सेवा को बारे मा डेटा केहि दिन पछि देखा पर्नु पर्छ। र तयार!
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, गुगल खोज कन्सोलमा वेबसाईट थप्ने काम सजिलो छ। व्यक्तिगत प्रमाणिकरण विधिहरूमा विस्तृत जानकारी एससी सहायता केन्द्रमा फेला पार्न सकिन्छ।
गुगल खोजी कन्सोलको आधारभूत कार्यहरू
खोज कन्सोल एक बहु-कार्यात्मक उपकरण हो जसले धेरै सम्भावनाहरूको प्रस्ताव गर्दछ। तपाईं यसबाट आफ्नो वेबसाइटको बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई गुगल खोजी ईन्जिनहरूमा अनुकूलन गर्न र तपाईंको स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको वेबसाइटको सेवा प्रविष्ट गरेपछि, बाँया पट्टि तपाईले मेनू र व्यक्तिगत सेक्सनको नतीजा देख्नुहुनेछ।
माथिबाट, हामीसँग: सिंहावलोकन, प्रभावकारिता, सुधारहरू, सुरक्षा र म्यानुअल कार्यहरू, पुराना उपकरणहरू र रिपोर्टहरू। अवलोकन खण्डमा, तपाइँ तपाइँको साइट को सारांश प्राप्त, कि, वेब खोज, साइट को स्थिति र सम्भावित सुधार गर्न सम्बन्धित क्लिकको कुल संख्या। प्रत्येक चार्टबाट, तपाई क्लिक गरेर अझ विस्तृत विश्लेषणमा जान सक्नुहुन्छ "खुला रिपोर्ट"। यो तपाईं लाई Google मा पृष्ठ को स्थिति को लागी प्रासंगिक व्यक्तिगत तत्व ट्र्याक गर्न अनुमति दिनेछ।
दक्षता गूगल सर्च कन्सोलमा उपलब्ध सबै भन्दा रमाइलो सेक्सनहरू मध्ये एक हो। ग्राफको आधारमा, हामी कार्बनिक ट्राफिक र खोजी ईन्जिनमा हेर्नुभएको पृष्ठहरूको संख्या, साथै औसत सीटीआर र वाक्यांशहरूको औसत स्थिति जाँच गर्न सक्दछौं।
अवश्य पनि, सबै डाटा फिल्टर र एक अर्कासँग तुलना गर्न सकिन्छ। अधिकतम अवधि जसको लागि एससी साइटको बारेमा डाटा संकलन गर्दछ १। महिना। खोजी कन्सोलले अनुमति दिने एउटा धेरै रोचक सुविधा समयको साथ डाटा तुलना गर्दैछ।
यस तरिकाले, तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी खोजी ईन्जिनमा पृष्ठको दृश्यता आकार थियो, चाहे जैविक यातायात र हेराईहरू घट्दै छन् वा बढ्दै छन्, आदि।
तपाईले खोज क्वेरीहरू, व्यक्तिगत उप-पृष्ठहरू, देशहरू, उपकरणहरू, खोज इञ्जिनमा देखा पर्न र मितिहरू फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुञ्जी शब्दहरूको सूची एक Google पानामा डाउनलोड गर्न सकिन्छ, एक्सेल पाना वा CSV को रूपमा। यो गर्नका लागि माथिको दाहिने कुनामा "निर्यात" बटन क्लिक गर्नुहोस्। मुख्य वाक्यांश विश्लेषण आवश्यक छ, विशेष गरी पृष्ठमा एसईओ गतिविधिहरूको सुरूवातमा। GSC उपकरण यसैले यस्तो विश्लेषण गर्न अमूल्य छ।
खोजी कन्सोलको अर्को आवश्यक सुविधा तपाईंको वेबसाइटको स्वास्थ्य मोनिटर गर्ने क्षमता हो। यस सेक्सनमा तपाईले आफ्नो साइटमा त्रुटिहरूको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ।
तपाईं पृष्ठमा त्रुटि देखा पर्दा ठ्याक्कै जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, वास्तवमा यो के चिन्ता हो र यसलाई सुल्झाउनेको चरणमा। दिईएको त्रुटिमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ।
त्रुटि अनुगमन धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि त्रुटिका साथ पृष्ठ न केवल गुगल रोबोटले नराम्रो व्यवहार गर्दछ, तर प्रयोगकर्ताहरूलाई मित्रैलो गरी। यसका बारे सम्झन र चालु आधारमा वेबसाइटको सर्त जाँच गर्न लायक छ, र त्रुटिहरूको मामलामा तुरुन्त यसलाई समाधान गर्नुहोस्।
गुगल खोजी कन्सोलले तपाईंलाई प्रविष्ट गर्न र तपाईंको साइटम्यापको स्थिति जाँच गर्न पनि अनुमति दिन्छ।
यसले तपाईंलाई सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ कि सबै यूआरएलहरू साइटम्यापमा समावेश छन् कि छैन। साइटम्यापले तपाईंको साइटलाई गुगल द्वारा अनुक्रमित गर्न सजिलो बनाउँदछ।
जान्नु पर्ने अर्को सुविधा डिलीसनहरू हुन्। यसले तपाईंलाई अस्थायी रूपमा निर्दिष्ट URL हरू लाई खोजी ईन्जिनमा लगभग6महिनाको लागि रोक्न अनुमति दिन्छ। यो सुविधा कहिले प्रयोग गर्ने र किन हामी अस्थायी रूपमा खोज कन्सोलमा URL हरू हटाउन आवश्यक छ?
एससी मा अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण सेक्सन अपग्रेड हो। यो जहाँ नयाँ "add-ons" समय-समयमा देखा पर्दछ, जस्तै भर्खरको वेब कोर मेट्रिक्स जुन दिइएको साइट भित्र URL हरूको गुणवत्ता देखाउँदछ। यसले मोबाइल र उपकरणहरूमा दुबै राम्रो र न्यून गुणहरूको ठेगानाहरू, साथै सुधार आवश्यक पर्नेहरूको संख्या देखाउँदछ।
यो डेस्कटप उपकरणहरूको लागि संस्करण जस्तो देखिन्छ। दिईएको त्रुटिमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनुहुनेछ।
अर्को, हामी जाँच गर्न सक्दछौं कि हाम्रो वेबसाइटमा गुगल द्वारा लगाईएको फिल्टर छ। म्यानुअल दण्डहरू (अर्थात् गुगल कर्मचारीद्वारा थोपाइएको) बारे जानकारी सुरक्षा र म्यानुअल कार्य सेक्सनमा फेला पार्न सकिन्छ।
यदि वेबसाइटमा लगाइएको जरिवानाको बारेमा सन्देश यहाँ देखा पर्दछ भने, दण्ड कसले लागू हुन्छ जाँच गर्नुहोस् र यी तत्वहरूलाई सही गर्नुहोस्। त्यसोभए तपाईं वेबसाईटबाट फिल्टर हटाउनको लागि भन्न सक्नुहुनेछ। वेबसाइट फिल्टरको बारेमा अधिक पढ्नुहोस्।
तपाईं यहाँ वेबसाईट भित्र प्राय बाह्रै लिंक भएका पृष्ठहरू र व्यक्तिगत उपपृष्ठहरूको लागि बाह्य लि links्कहरूको विश्लेषण गर्दछ। तपाईं सबैभन्दा इनबाउन्ड लिंक भएका साइटहरू पनि जाँच गर्नुहुनेछ। तपाईं यो डाटा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ, जुन तपाईं यसको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ।
गुगल खोजी कन्सोलको अन्तिम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य उपपृष्ठहरूको अनुक्रमणिका हो। एससी प्यानलको शीर्षमा, तपाईं तपाईंको वेबसाइटबाट कुनै URL प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको अनुक्रमणिका स्थिति जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
ठेगाना टाँसिसकेपछि, प्रविष्ट क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ कि दिइएको सबपेज गुगल अनुक्रमणिकामा छ वा कहिले यो अन्तिम अनुक्रमणिकामा थियो।
तपाईं गुगललाई यो पृष्ठ क्रल गर्न भन्न सक्नुहुनेछ, यसको मतलब, यसलाई फेरि भ्रमण गर्न र यसमा अन्तिम परिवर्तन पछि आएको परिवर्तनहरू रेकर्ड गर्न।
जीएससी एक एकदम सरल र सहज उपकरण हो जहाँबाट तपाईं आफ्नो वेबसाइटको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीको धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म तपाईं वेबसाइटमा परिवर्तन गर्न वा स्थितिसँग सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने, Semalt तपाइँलाई तपाइँको वेबसाइट खोज कन्सोलमा थप्न सिफारिश गर्दछ। वेबसाइटमा के भइरहेको छ निगरानी गर्न र नियमित आधारमा सुधारहरू गर्न लायकको छ। यस तरीकाले तपाईले खोज ईन्जिनमा आफ्नो वेबसाइटको दृश्यता बढाउनुहुनेछ। यदि तपाइँसँग SC को बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, कृपया पोष्टको तल टिप्पणी दिनुहोस्!
१. गुगल खोजी कन्सोल भनेको के हो?
गुगल सर्च कन्सोल गुगल प्रशासकहरू बाट पूर्णतया नि: शुल्क उपकरण हो जुन वेबसाइट प्रशासकहरूका लागि सिर्जना गरिएको हो। यो विशेष गरी एसईओ र ईन्टरनेट मार्केटिंग को साथ व्यवहार गर्ने मानिसका लागि उपयोगी छ। यसले साइटमा अन्य जैविक यातायात, साइट अनुक्रमणिका स्थिति, र संख्या र आन्तरिक र बाह्य लिंकहरूको गुणस्तरको बीचमा मोनिटर गर्न अनुमति दिन्छ।
२. गुगल खोजी कन्सोलबाट म कुन डाटा पढ्न सक्छु?
गुगल खोज कन्सोलको धेरै व्यावहारिक कार्यहरू छन्। उपकरणले तपाईंलाई डाटा विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ जस्तै खोज ईन्जिनहरूमा हेरिएको पृष्ठहरू, जैविक यातायात, औसत सीटीआर र वाक्यांशहरूको औसत स्थिति। थपमा, तपाई कुन मुख्य वाक्यांशहरू वेबसाइटमा प्रदर्शित हुन्छ र कुन उपपृष्ठहरूले ट्राफिक उत्पन्न गर्दछ भनेर जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। एससीले तपाइँलाई पृष्ठ अनुक्रमणिका स्थिति र मोबाइल संस्करण र कम्प्युटरहरूमा दुबै हुने त्रुटिहरू जाँच गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरणले तपाईंलाई भन्नेछ कि तपाईंको वेबसाइट एक गुगल जरिवाना द्वारा जरिवाना लगाइएको छ भने।
Google. गुगल खोजी कन्सोलमा कसरी साइट साइटम्याप थप गर्ने?
गुगल खोजी कन्सोलमा साइट साइटम्याप थप्नका लागि, "साइटम्याप" मा जानुहोस्, साइटम्याप ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र "सबमिट गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। पेश गरिएको साइटम्याप तल तालिकामा देखा पर्नेछ। यसले साइटम्यापमा समावेश सबै यूआरएलहरू अपलोड हुनको लागि धेरै दिन लिन सक्दछ।